Shirkii Madaxda Soomaaliya Ee Garoowe Oo Fashilmay Oo Lagu Kala Kacay | Berberatoday.com
Shirkii Madaxda Soomaaliya Ee Garoowe Oo Fashilmay Oo Lagu Kala Kacay
Shirkii Madaxda Soomaaliya Ee Garoowe Oo Fashilan
Garowe(Berberatoday.com)-Wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in shirkii halkaasi uga socday mas’uuliyiinta maamul goboleedyada iyo madaxada dowladda ferderaalka ee Soomaaliya uu umuuqdo mid fashil ku soo dhamaanayo.
Warar ay BBC-du heshay ayaa sheegaya in madaxda maamul goboleedyada qaar ayba suurtagal tahay in saaka ay ka dhoofaan magaalasaasi oo ay ku laabtaan deegaanadii ay ka yimaadeen.
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam (Axmad Madoobe) ayaa lagu soo waramayaa in ay diyaaradi u taagan tahay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe, lana filayo in saaka uu u dhoofo dhanka magaalada Kismaayo ee xarunta maamulkiisa.
Madaxweynaha Puntland ee martida loo yahay ayaa isna la filayaa in uu maanta ka hadlo sida ay wax u socdaan iyo halka uu xaal marayo.
Muddo saddex bilood ah ayaa haatan ka hartay xilligii loo qabtay in ay dhacdo doorashada madaxtinimada ee Jubbaland, balse ka hor intii aanan la billaabin hawshii isku-duba ridka doorashada ayaa waxaa durbaba soo baxaya muran la xiriira doorashadaasi.
Kala duwanaansho siyaasadeed
Farqada 7-aad ee isla qodobkan ayaa si cad u sheegaya in haddii baarlamaanka muddada loo kordhiyo, in madaxweynahana ay sidaas isla mudadaasi ugu kordheyso xilheynta madaxweynaha jamhuuriyadda.
Sidoo kale waxaa jira arrinta sharciga batroolka oo aad loogu kala aragti duwan yahay.
Saameynta khilaafkii waddamada khaliijka